စက်တင်ဘာလထဲမှာဖှယျရှိသညျထဲက New ကို iPhone ကို - သတင်း Rule
စက်တင်ဘာလထဲမှာဖှယျရှိသညျထဲက New ကို iPhone ကို
Apple ကစက်တင်ဘာလအတွက်၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ် iPhone ကိုလွှတ်ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်, ပိုမိုမြင့်မားသော resolution နဲ့ပိုကြီးဖန်သားပြင်နှင့်အတူ, တစ်ဦးအစီရင်ခံစာသောကြာနေ့ကပြောပါတယ်, ထိုသို့သောက Samsung အဖြစ်ပြိုင်ဘက်မှကမ္ဘာ့စျေးကွက်ဝေစုကိုဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးရှိရာစမတ်ဖုန်းစစ်ပွဲများအတွက်၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ် salvo.
အသစ်ဟန်းဆက်, အိုင်ဖုန်းကိုခေါ်ခံရဖို့မျှော်လင့်ထား 6, တစ်ဦးနှင့်အတူနှစ်ဦးဗားရှင်းလာရန်ဖြစ်ပါသည် 4.7- သို့မဟုတ် 5.5 လက်မအရွယ် screen ကို, လက်ရှိလေးလက်မ panel ကထက်ပိုကြီးတဲ့နှစ်ဦးစလုံး, အလေးစားဂျပန်သတင်းစာ Nikkei စီးပွားရေးနေ့စဉ်ကပြောပါတယ်, သတင်းရင်းမြစ်ကို ကိုးကား. မပါဘဲ.
အမေရိကန်အခြေစိုက် Apple ကဧရာ Sharp ကဂျပန်အီလက်ထရွန်းနစ်မှ၎င်း၏ Higher-resolution ကိုအရည်ကျောက်သလင်းခင်းကျင်းပြသဖန်သားပြင်မိန့်သည်, ဂျပန်ပြရန်နှင့် တောင်ကိုရီးယားရဲ့ LG Display, ကဆက်ပြောသည်.
Apple က iPhone ကိုဖြန့်ချိ5စက်တင်ဘာလထဲမှာ 2012 စီးရီးအတွက်နှင့်အသစ်များဗားရှင်းပြီးခဲ့သည့်နှစ်က.
ကယ်လီဖိုးနီးယားနည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးများအတွက်ဂျပန်အခြေစိုက်ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကိုချက်ချင်းဂျပန်သတင်းစာ Nikkei အစီရင်ခံစာအပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်ရောက်ရှိမရနိုင်, ကျယ်ပြန့်တဲ့နည်းပညာသတင်းဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏တစ်ဦး string ကိုတက်ခူးခဲ့သော.
ထိုင်ဝမ်ရဲ့ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် Times ကထိုင်ဝမ် Semiconductor Manufacturing Co. , သောဤလကပြောပါတယ်ပြီးနောက်ဂျပန်သတင်းစာ Nikkei ပုံပြင်လာ. လာမည့် iPhone အတွက်ချစ်ပ်ထုတ်လုပ်စတင်ခဲ့.
ဒါကသတင်း Apple ကတောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီကြီး Samsung ကအပေါ်အစိတ်အပိုင်းများ၎င်း၏မှီခိုလျှော့ချကြောင်းကောလာဟလတိုက်ကျွေး, ၎င်း၏မိုဘိုင်းဖုန်းဈေးကွက်အတွက်အဓိကပြိုင်ဘက်ကတကမ္ဘာလုံးအများအပြားမူပိုင်ခွင့်တရားရုံးမှာတိုက်ပွဲယှဉ်ပြိုင်သောအတူခါးသီးပြိုင်ဘက်.
ဖေဖေါ်ဝါရီလအတွက် Samsung ကတစ်လက်ဗွေစကင်နာများနှင့် built-in နှလုံးခုန်နှုန်းအာရုံခံကိရိယာနှင့်အတူလက်နက်ပါက၎င်း၏အသစ်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်စမတ်ဖုန်း Galaxy S5 ကိုထုတ်ဖော်ပြသ, ကဒေါ်လာဘီလီယံနှင့်ချီစျေးကွက်၏၎င်း၏ခေါင်းဆောင်မှုခိုင်မြဲဖို့ကြိုးစားပါတယ်အဖြစ်.
iPhone ကို6သို့မဟုတ် iPhone ကို Air လေကြောင်းလိုင်း? (ဓာတ်ပုံအကြွေး: Utrecht မှမာတင်)
သို့သော်, ပြည်တွင်းတယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာအားပြိုင်မှုများကချမှတ် Dodge အရောင်းကန့်သတ်နိုင်ရန်အတွက်ရှေ့ဆက်အချိန်ဇယားကို၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ်စမတ်ဖုန်းပြန်လွတ်လာပြီးနောက်တောင်ကိုရီးယားဧရာမမျက်ဒေါသထုတ်ဖော်ပြောဆို. ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးမိုဘိုင်းဖုန်းထုတ်လုပ်သူကဧပြီလရက်နေ့တွင် Galaxy S5 ကိုတစ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းပွဲဦးထွက်စီစဉ်ထားခဲ့ 11.
Samsung ကအကြောင်းလုပ် 30 ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကတစ်ကမ္ဘာလုံးကိုရောင်းအားလုံးစမတ်ဖုန်း၏ရာခိုင်နှုန်းက, Apple က၏နီးပါးနှစ်ကြိမ်ရှယ်ယာ.
– ပြင်းစွာသောအပြိုင်ဆိုင်မှု, အမြတ်အစွန်းစိုးရိမ်ပူပန်မှုများ –
International Data Corporation ကတစ်ဦးကစစ်တမ်းကောက် (IDC မှ) ပြီးခဲ့သည့်လကဂူးဂဲလ်ရဲ့ကပြောပါတယ် အန်းဒရွိုက်စနစ်အား — တခြားသူတွေကိုအကြားက Samsung ကအသုံးပြု — ၏နောက်ဆုံးသုံးလပတ်တွင် Apple ရဲ့ iPhone ကိုကျော်က၎င်း၏အကျိုးအမြတ်တိုးချဲ့ 2013, နဲ့ Windows Phone အရေအတွက်သုံးဈေးကွက်အနေအထားဆှဲ.
သို့သော်အခြားစိန်ခေါ်ထိုင်ဝမ်ရဲ့ HTC ကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်အတူရာထူးတက်ရွေ့လျားနေကြသည်. Sony ကသူ့ရဲ့က Xperia ရာပူဇော်သက္ကာ၏အားကြီးသောရောင်းအားမွငျဖူးစဉ်က၎င်း၏ HTC One ကိုစမတ်ဖုန်းတစ်ခု update ကိုစတင်ခဲ့ပြီးမှ.
စမတ်ဖုန်းကို Global တင်ပို့ရောင်းချမှုသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အဘီလီယံပဲရှိတယ်, ထ 38.4 မှရာခိုင်နှုန်းက 725.3 အတွက်တင်ပို့သန်း 2012.
ပန်းသီး, သို့သော်, ၎င်း၏ 5S နဲ့ 5C မော်ဒယ်များပိုပြီးနိုင်ငံများရှိရရှိနိုင်ခဲ့ကြသော်လည်းအားလုံးအဓိကစမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူများနိမ့်ဆုံးတစ်နှစ်-on-တစ်နှစ်တိုးခဲ့သည်, IDC မှအညီ.
စံချိန်ကို iPhone နှင့် iPad ရောင်းအားသစ်တစ်ခုမြင့်မားရ​​င်းနှီးမြှုပ်နှံသူများမှ Apple ၏စတုတ္ထသုံးလပတ်ဝင်ငွေပြင်းစွာသောအမိုဘိုင်း gadget ကစျေးကွက်တွေမှာအားနည်းအမြတ်အစွန်းကျော်စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ကြတွန်းနေစဉ်.
ကယ်လီဖိုးနီးယားအခြေစိုက်နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးများ၏အသားတင်ဝင်ငွေဖော်ပြခဲ့သည် $13.1 ၏ဝင်ငွေပေါ်ဘီလီယံအထိ $57.6 ဒီဇင်ဘာလတွင်အဆုံးသတ်သောသုံးလပတ်အတွင်းဘီလီယံအထိ 28, ရောင်းချခြင်းအားဖြင့်ကူညီပေးခဲ့ 51 သန်းအိုင်ဖုန်း.
၎င်း၏ဝင်ငွေအခါ Apple ကတစျနှစျအစောပိုငျးကအတူတူပင်သုံးလပတ်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်အဖြစ်အမြတ်တူညီခဲ့သည် $54.5 ဘီလီယံအထိ.
ဇန်နဝါရီလထဲမှာ, ကရည်မှန်းချက်တရုတ်မိုဘိုင်းအဖြစ်ထပ်တိုးတယ်, တိုင်းပြည်ရဲ့အကြီးမားဆုံးကြိုးမဲ့ပံ့ပိုးပေး, တစ်နိုင်ငံလုံးဖောက်သည်သန်းပေါင်းများစွာမှ iPhone ကိုရောင်းချခြင်းစတင်, တစ်ဦးအလွန်အရေးပါဈေးကွက်ထဲမှာတစ်ဦးခြောက်နှစ်ချောင်းမြောင်းအဆုံးသတ်.
တရုတ်နိုင်ငံလက်ကိုင်ဖုန်းတစ်ခုရှိပါတယ် 760 သန်း-အားကြီးသောဖောက်သည်အခြေစိုက်စခန်းနှင့်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး 4G ထွက်လှိမ့်ရန်၎င်း၏အစီအစဉ်များ (စတုတ္ထမျိုးဆက်) ကွန်ယက်ကိုအသီးအနှံများပြည်ထောင်စုခန့်မှန်းကုမ္ပဏီနှစ်ခုစလုံးရှိ.
တစ်ဦးက Sharp ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူသောကြာနေ့ဂျပန်သတင်းစာ Nikkei အစီရင်ခံစာအပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်ငြင်းဆန်ခဲ့သည်, ကုမ္ပဏီ၏တိုကျို-စာရင်းရှယ်ယာမြင့်တက်အဖြစ် 1.63 ရာခိုင်နှုန်းက, တစ်ဦး outpacing 0.50 ကျယ်ပြန့်ဈေးကွက်တွင်ရာခိုင်နှုန်းကိုတိုးမြှင့်.
ဤဆောင်ပါး, စက်တင်ဘာလထဲမှာဖွယ်ရှိထုတ် iPhone အသစ်, ဂျပန်သတင်းစာ Nikkei ကဆိုပါတယ်နေ့စဉ်, ကနေစုစည်းတင်ဆက်သည် AFP သို့ နှင့်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ဤနေရာတွင် posted ဖြစ်ပါတယ်. မူပိုင်ခွင့် 2014 AFP သို့. မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး
22833	0 Android မှာ, ပန်းသီး, HTC က, iPhone ကို, LG Display, ဂျပန်သတင်းစာ Nikkei, Samsung က, တောင်ကိုရီးယား
← MH ပေါ်တွင်ခရီးသည် Remembering 370 E-စီးကရက်ဆေးလိပ်သောက်အဆိုပါငျြ့ Kick ကိုကူညီပါမနေပါနဲ့ →